'Maty & Kanto' ho an'ny Premiere amin'ny Shudder amin'ny 4 Novambra
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Maty & Kanto' ho an'ny Premiere amin'ny Shudder amin'ny 4 Novambra
by Waylon Jordan Septambra 23, 2021
by Waylon Jordan Septambra 23, 2021 242 hevitra
mangovitra dia nandray ny zon'ny fizarana amin'ny faritany rehetra misy azy Maty & Kanto, ilay thriller psychologique vaovao avy amin'ny mpanoratra sy talen'ny David Verbeek (Club Zeus).
Avy amin'ny synopsis an'ilay horonantsary:
Aziatika dimy amby roapolo manankarena sy simba (Gijs Blom, Aviis Zhong, Yen Tsao, Philip Juan, Anechka Marchenko) no mijaly amin'ny ennui ambony, tsy matoky ny fomba handany ny androny nefa kely ny zavatra andrasana amin'izy ireo. Eo am-pitadiavana fientanam-po, namorona ny "Circle" ireo namana dimy, vondrona iray hifandimbiasan'izy ireo amin'ny famolavolana traikefa miavaka sy mihoapampana ho an'ny hafa. Saingy tsy mandeha ny zava-misy rehefa mifoha ireo mponina an-tanàn-dehibe rehefa avy mivoaka alina, rehefa nahita fa nanangana tady vampira ary mangetaheta nofo sy ra ary fitsangatsanganana tsy misy famonoana na inona na inona vidiny.
Maty & Kanto dia vonona ihany koa hilalao Fantastic Fest any Austin amin'ny sabotsy 25 septambra 2021.
Ho azo jerena ao amin'ny Shudder any Etazonia, Canada, UK, Ireland, Australia ary New Zealand ny sarimihetsika amin'ny 4 Novambra 2021.
Ilay tranofiara dia manome topy maso topy mason'ilay sary mihetsika. Mihaona ny alina mihasimba sy ny andro manjavozavo rehefa manandrana mamantatra izay ho azony iainana ny namana nefa manina ny hetahetany.
Ie, ambany daholo izahay noho izany rehetra izany.
Zahao ny tranofiara etsy ambany ary ampahafantaro anay raha mijery ianao Maty & Kanto rehefa manomboka amin'ny volana novambra amin'ny Shudder!